गृहपृष्ठ » समाचार » सालकको खपडा सहित २ जना पक्राउ, यसको मुल्य कति छ ? किन बिक्रि हुन्छ ?
काठमाडौ । काठमाडौं महानगरपालिका-७ चाबहिलस्थित शान्तिगोरेटो चोकबाट १ किलो २५ ग्राम तौल भएको प्रतिबन्धित सालकको खपडा सहित २ जनालाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रे महाभारत गाउँपालिका-२ बाल्टिङ घर भई काठमाडौं स्वयम्भू बस्ने २५ वर्षीय बिनोद तामाङ र काभ्रे सल्ले भुल्बु गाउँपालिका-३ घर भई काठमाडौं चाबहिल बस्ने ४७ वर्षीय लाल सिंह तामाङ रहेका छन् ।
चीनमा सोखको रुपमा धनीहरुले सालकलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । चीनमा धनीहरुले सालकको खपटालाई सजावट र मासुको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाईन्छ । चीनको बजारसम्म पुर्याउँदा यसको लाखौ मुल्य पाइने भएकाले व्यापार भइरहेको छ । त्यहाँ कछुवालाई गुड लक मानिन्छ । विहान उठ्नासाथ कछुवा हेर्न पायो भने गुड लक हुने विश्वास छ ।
विश्वमा ८ प्रजातीको सालक पाईन्छ ति मध्ये दुई प्रजातीको सालक नेपालमा पाईन्छ । नेपालमा चीनीया सालक र ईन्डियन सालक पाईने गरेको छ ।
विश्वमा पाइने आठ प्रजातिका सालकमध्ये संसारमै दुर्लभ मानिएका दुई प्रजाति– कालो सालक अर्थात् चाइनिज प्याङ्गोलिन र तामे सालक अर्थात् इन्डियन प्याङ्गोलिन नेपालमा पाइन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) ले कालो सालकलाई जोखिमपूर्ण र तामे सालकलाई खतरायुक्त सूचीमा राखेको छ ।
तथापि अहिले त्योभन्दा पनि बढी नाजुक अवस्थामा रहेको चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गर्दछन् । सालकको मुख्य आहारा धमिरा हो । यसले कमिला लगायत अन्य साना कीराहरू पनि खाने गर्दछ । एउटा सालकले एक वर्षमा सरदर सात करोड धमिरा लगायत कीरा फट्याङ्ग्राहरू खाने विज्ञहरू बताउँछन् ।
विश्वका ठूला हतियार निर्माण कम्पनीहरु नै चीनियाँ सरकारी संस्था, कस्ता–कस्ता छन् हतियार
पूर्वपति मनोज गजुरेलले विवाह गर्न लागेको खुलेपछि मीना ढकालका आए प्रतिक्रियामाथी प्रतिक्रिया
प्रविधिमार्फत नागरिकका हातहातमै सरकारी सेवा पुर्याउने मन्त्रीको दावा